Soo iibso gooyn | Dalbo geedo guri oo dhif iyo naadir ah - Xarafka goynta
Maalinta Hooyada waxay bixisaa 2022
Dhirta guriga ee dhifka ah
Xidhmada bilawga ah
Eurobangers heshiis gorgortan ah
Terrarium & dhirta beerta dhalada
Imaatinka ugu dhakhsaha badan
Goynta iyo dhirta bilaashka ah
Dhirta hawada nadiifisa
Dhirta gaarka ah
Dhirta iyo geedo yaryar
caleemaha kala duwan
Geraniums toosan aagga
biyo raaci gargaarka
Booska: Baakadaha, dalbashada dalbashada
Hadiyadaha xayaysiinta ee asalka ah
Dib u eegista bulshada
Tartanka Sawirka Bixinta
Nagala soco barta Instagram
5 Talooyin ku saabsan marka goyntaadu ay timaado goyntaada
Alocasia: geedo-guri qurux badan oo qalaad
Dib u soo celinta dhirta guriga
5 guri oo fudud
Hooska dhirta guriga
Dheriga ubaxa cabbirkee ayaan u baahanahay?
10ka isbeddel ee ugu sarreeya ee dhirta guriga
10 Talooyin ku saabsan daryeelka dhirta guriga
10 guri-guri oo carruurta ku habboon
Isbeddelka dhirta guriga
Daryeelka ugu fiican ee dhirta guriga
Cayayaanka ku jira dhirta gurigayga!
Philodendron - asalka iyo talooyinka daryeelka
fiber qumbaha; beeridda, goynta iyo dhiraynta ugu habboon ciidda
Talooyin December - daabacaadda Christmas
Geedka kirismaska ​​oo baxay, guri-guri 2021
I caawi! Caleemaha jaalaha ah ee dhirta gurigayga
Ma tahay macmiil ama beeraley?
Warqad Goynta Wargeysyada
Qoraaladii u dambeeyay ee Warqad Goynta
Liiska aan doonayo
Monstera Variegata goynta dhalinyarada
Ma la qabsan doontaa loolanka goyn dhif ah oo aan xidid lahayn? †
Waa ku mahadsan tahay!
Syngonium Albo. qiyaastii goyn
Hadiyad fiican naftaada ama saaxiibkaaga? †
Monstera Pinnati qayb ka goynta
Ka yaabi gacaliyahaaga maalinta jacaylka ee xildhibaankayaga
Monstera Variegata - Goynta dhalinyarada!
Daredevil on tartankan cagaaran ee magaalada!?
Haa, waan ku dhiirraday, isaga ha noolaado! †
Philodendron Cobra waa dhir aad dhif u ah oo gaar ah sababtoo ah caleemaha gaarka ah ee leh midabyo kala duwan.
Philodendron Burle Marx Variegata goynta aan xididka lahayn
Philodendron Burle Marx Variegata waa Philodendron naadir ah oo leh caleemo kala duwan oo qurux badan.
Runtii ma rabtaa inaad xaaskaaga ama saaxiibadaa aad kaga farxiso Pilea Mojito?
Goynta ajada sphagnum
Qorshaha tillaabo-tallaabo: gooynta moss sphagnum ee bilowgayaasha
RoadmapkaSoo iibso sphagnum moss bakteeriya la'aan ah
Yaabku maaha inuu nagu qaali noqdo
Sababtoo ah ma jiraan wax ka xiiso badan in la yaabay!
Sanduuqa goynta layaabka leh ee rujiyay 5 pcsSanduuqa goynta layaabka leh ee aan xididka lahayn 4 pcs
Hadiyad ganacsi oo waarta?
Ku mahadnaq asxaabtaada qaaliga ah shaqadayada cagaaran ee hadiyadaha guriga!
Santuuqa goynta yaabbanWarbixin dheeraad ah?
Yaab saaxiibkaa ugu fiican?
U soo dir Hoya Kerri Double Hearts oo wata kaadhka salaanta!
Hoya Kerry Double Heartskaadhka salaanta
Laga soo bilaabo lover dhirta ee Australia in beeralayda ee Nederland
Ka dhig kayn magaalo oo qurux badan!
Ku hel dhammaan dhirtaada riyada sanduuqaaga waraaqaha!
TALO HADIYAD: HOOYO
Sidee loola yaabi hooyada guriga ama meel fog si asal ah?
sanduuqa la yaabka lehDheriga qolka cas ayaa kacay
Goynta isku darka dhammaan gooynkaaga
Isticmaal lacagtan isku dhafka ah ee goynta si aad u siiso gooynta dhallaankaaga bilow koritaan wanaagsan.
10 L Perlite ee gooynkaaga
Ku bilow tacabirka goyntaada perlite!
Anthurium Crystallinum xidid goynta
Waa hagaag, waxaan ahay Anthurium Crystallinium!
PWP Marwadayda €21.95
Waad waydiisay, waananu dhagaysanay :)
9 x Dhirta cagaaran sida hadiyadaha Maalinta Jacaylka iyada ama isaga
Goyntayada caanka ah iyo dhirta isku xigta
Soo rarid bilaash ah dalabaadka ka sarreeya €94,95 [NL]
Imaatinka ugu dhakhsaha badan, dhirta guriga
Iibka iyo daryeelka Alocasia Frydek Variegata
Alocasia Frydek Variegata waa geed naadir ah oo qurux badan. Waxay leedahay cagaar qoto dheer oo qani ah, qaybo iyo kala duwanaansho u eg, iyo caleemo cidhiidhi ah oo qaabaysan wadnaha oo leh xididdo cadcad oo isbarbar dhigaya. Dhererka petioles wuxuu ku xiran yahay inta ama iftiin yar oo aad siiso geedkaaga. Iftiin ayaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo hadhyada.
Alocasia waxay jeceshahay biyaha waxayna jeceshahay inay iftiin ku jirto…
Iibso Philodendron Melanochrysum
Philodendron melanochrysum waa nooc ka mid ah dhirta ubaxa ee qoyska Araceae. Philodendron-gan gaarka ah oo soo jiidashada leh aad buu naadir u yahay waxaana sidoo kale loo yaqaan Dahabka Madow.
Soo iibso Philodendron Melanochrysum gooyn aan xidid lahayn
Deeqo, dhirta guriga
Iibso gooynta Spot Tricolor Syngonium
Dhig geedka meel iftiin leh, laakiin ha ku jirin qorraxdu si toos ah. Haddii geedku aad u madow yahay, caleemaha ayaa noqon doona cagaar.
Ciidda ha yara qoyan; ciidda ha u ogolaanin inay engegto. Way ka wanaagsan tahay in si joogto ah loo waraabiyo qadar yar marka loo eego wax badan markiiba. Caleen jaale ah macnaheedu waa biyo badan ayaa la bixiyaa.
Pixie wuxuu jecel yahay buufinta xagaaga!
Iibso Monstera adansonii variegata - dheri 12 cm
Monstera adansonii variegata, oo sidoo kale loo yaqaan 'geedka daloolka' ama 'maaskarada daanyeer ee philodendron' variegata, waa warshad aad dhif u ah oo gaar ah sababtoo ah caleemaha gaarka ah ee godadka leh. Tani sidoo kale waa waxa siinaya geedkan naaneyska. Asal ahaan Monstera obliqua waxay ka baxdaa kaymaha kulaylaha ee Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika.
Dhig geedka meel diiran oo iftiin leh iyo…
Deeqo, Heshiisyada Jimcaha Madow 2022
Monstera obliqua adansanii variegata – madax goyn aan xidid lahayn
Monstera obliqua variegata, oo sidoo kale loo yaqaan 'geedka daloolka' ama 'maaskarada daanyeer ee philodendron' variegata, waa warshad aad dhif u ah oo gaar ah sababtoo ah caleemaha gaarka ah ee godadka leh. Geedkani waxa kale oo uu leeyahay naanaystiisa. Asal ahaan Monstera obliqua waxay ka baxdaa kaymaha kulaylaha ee Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika.
Iibso Monstera adansonii variegated - dheri 13 cm
Monstera adansonii variegata - iibso gooyn aan xidid lahayn
Monstera Dubia iibsashada iyo daryeelka gooyn aan xidid lahayn
Monstera dubia waa dhif, kala duwanaansho yar oo caan ah oo Monstera ah marka loo eego Monstera deliciosa ama Monstera adansonii, laakiin kala duwanaanshaheeda quruxda badan iyo caado xiiso leh ayaa ka dhigaya mid aad u weyn ururinta dhirta guriga.
Deegaankeeda kulaylaha ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika, Monstera dubia waa geed canab ah oo gurguuran oo kor u baxa geedaha iyo dhirta waaweyn. Dhirta dhallinta waxaa lagu gartaa…
Monstera albo borsigiana variegata - iibso gooyn yar yar
De Monstera Variegata Shaki la'aan waa geedka ugu caansan 2021. Caannimadiisa awgeed, beeralayda ayaa si dhib leh ula socon kara baahida. Caleemaha quruxda badan ee Monstera ma aha oo kaliya qurxinta, laakiin sidoo kale waa warshad hawada nadiifisa. Shiinaha, Monstera waxay calaamad u tahay cimri dherer. Geedka ayaa si fudud u daryeeli kara waxaana lagu beeri karaa gudaha…
dhirta guriga, dhirta yaryar
Iibso Syngonium Podophyllum Albo Variegata
Deeqo, Imaatinka ugu dhakhsaha badan
Iibso oo daryeel Syngonium Red Spot Tricolor
Soo iibso oo daryeesho gooynta cagaarka cagaaran ee Syngonium
Syngonium wuxuu jecel yahay buufinta xagaaga!
Monstera adansanii laniata gooyn aan xidid lahayn oo iib ah
Monstera adansonii laniata goynta aan xididka lahayn, oo sidoo kale loo yaqaan 'warshada godka' ama 'maaskarada daanyeer philodendron', waa mid gaar ah. dhirta sababtoo ah caleemaha gaarka ah ee godadka leh. Geedkani waxa kale oo uu leeyahay naanaystiisa. Asal ahaan Monstera adansanii laniata waxay ka baxdaa kaymaha kulaylaha ee Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika.
Dhig geedka meel diiran oo iftiin leh…
Monstera albo borsigiana variegata - gooyn madaxa xididaysan
De Monstera Variegata Shaki la'aan waa geedka ugu caansan 2019. Caannimadiisa awgeed, beeralayda ayaa si dhib leh ula socon kara baahida. Caleemaha quruxda badan ee Monstera fillodendron ma aha oo kaliya qurxinta laakiin sidoo kale waa warshad hawo-nadiifinta. Gudaha Shiinaha Monstera waxay astaan ​​​​u tahay nolol dheer. Geedka ayaa si cadaalad ah u fudud in la daryeelo…
Iibso Syngonium Albo variegata semimoon goynta aan xididka lahayn
Syngonium Podophyllum Albomarginata goynta aan xididka lahayn
Syngonium Podophyllum Albo Variegata oo aan xidid lahayn madaxa goynta
Monstera albo borsigiana variegata - goynta xididka leh
Monstera albo borsigiana variegata - goynta dhalinyarada
De Monstera Variegata Shaki la'aan waa geedka ugu caansan 2021. Caannimadiisa awgeed, beeralayda ayaa si dhib leh ula socon kara baahida. Caleemaha quruxda badan ee Monstera fillodendron ma aha oo kaliya qurxinta laakiin sidoo kale waa warshad hawo-nadiifinta. Gudaha Shiinaha Monstera waxay astaan ​​​​u tahay nolol dheer. Geedka ayaa si cadaalad ah u fudud in la daryeelo…
Iibso oo daryeel Syngonium Green Splash
Soo iibso Rhapidophora tetrasperma minima jeexjeexyada variegata
Ka dib dagaal tartan ah oo ka dhacay goobta xaraashka ee New Zealand, qof ayaa iibsaday geedka gurigan oo leh 9 caleemood oo keliya rikoor $ 19.297 ah. Warshada Rhaphidophora Tetrasperma Variegata oo cadaan ah, oo sidoo kale loo yaqaan Monstera Minima variegata, ayaa dhawaan lagu iibiyay xaraash online ah. Waxay keentay $19.297 qabow, taasoo ka dhigaysa "guriga ugu qaalisan abid" mareegta iibka dadweynaha ganacsiga…
Iibso gooyn wadnaha cas ee Syngonium
Iibso oo daryeesho gooynta barafka strawberry ee Syngonium
Soo iibso Syngonium Pink Splash gooyn aan xidid lahayn
Goynta iyo dhirta bilaashka ah, dhirta guriga
Geedka farta – Iibso gooyn xididaysan Fatsia japonica
Farta Farta waxaa sidoo kale loo yaqaan Fatsia Japonica iyo sida magaca u muuqda inuu tilmaamayo, geedkaani wuxuu ka yimid kaymaha qalaad ee Japan. Sababtoo ah caleemaha waxay leeyihiin qaabka gacmaha ee faraha, magaca Nederlandka maaha mid waalan oo la doortay. Farta Farta waa qayb ka mid ah qoyska ivy waana ay fududahay in la…
Fittonia Bubble Cas - Dhirta Mosaic
Geedka Muuse (Fittonia) waa geed koradh yar oo ka soo baxa Koonfurta Ameerika (Peru)† 'Yar, laakiin geesi ah' Fittonia dhab ahaantii waa loogu yeeri karaa. Tan iyo markii la bilaabay dayrtii 2007, in ka badan 100.000 oo unug ayaa la iibiyay. Waxaa geed mosaic ah, sida Fittonia sidoo kale loo yaqaan, waxay kor ugu kacdaa wax ka yar shan sentimitir. Laakiin sida muuqata way garanaysaa...
Heshiisyada Jimcaha Madow 2022, dhirta guriga
Fittonia albivensis Mosaic Plant Caleemaha Cas
Geedka Muuse (Fittonia) waa geed koradh yar oo ka soo baxa Koonfurta Ameerika (Peru)† 'Yar, laakiin geesi' ah ayaa runtii loogu yeeri karaa Fittonia Mosaic Kings Cross. Tan iyo markii la bilaabay dayrtii 2007, in ka badan 100.000 oo unug ayaa la iibiyay. Waxaa geed mosaic ah, sida Fittonia sidoo kale loo yaqaan, waxay kor ugu kacdaa wax ka yar shan senti mitir. Laakiin sida muuqata...
Aad u xiiso badan oo ku saabsan khibradaha macaamiisheena qaarkood
Adeegga ugu sarreeya iyo gaarsiinta degdegga ah
[EN] Soo rarid degdeg ah, iyo qurux, dhir caafimaad leh! Inkastoo xaqiiqda ay ku sugnaayeen PostNL usbuuca dhan, wali waxay u ekaayeen kuwo wanaagsan, si fiican loo baakadeeyay iyo ciidda si fiican u qoyan. lagu taliyay!
Dhirta ayaa ah mid cajiib ah oo si fiican loo daryeelo
[BE] Dalabkaygii ugu horreeyay ee lagu keeno Belgium dhawr maalmood gudahood. Baakad aad u wanaagsan, gooyn iyo dhir ayaa ka soo baxay sanduuqa iyada oo aan waxyeello loo geysan. Mudan in lagu celiyo, mahadsanid!
Xaqiiqdi waxaan ku talinayaa Warqad Goynta!
Gaadhida jiilaalka ee degdega ah oo ay ku jirto bacda kulaylka ee Talyaaniga
[IT] Waxay ka dalbatay dhirtayda Talyaaniga xilliga jiilaalka, dhirtu waxay si degdeg ah u timid oo si fiican loo baakadeeyey oo ay ku jirto baakad kulaylka! Sicir aad u wanaagsan iyo sidoo kale jawaabta degdega ah ee adeegga macaamiisha. Xaqiiqdi waxaan ku talinayaa dukaankan!
Dhammaan dhirtaydii waxay si nabad ah ku yimaadeen Jarmalka
[DE] Dhammaan dhirtayda guriga waxay yimaadeen iyagoo si fiican u buuxsamay xitaa ka dib 4 maalmood oo dib u dhac ku yimid kala-soocidda PostNL iyo 4 maalmood ee adeegga Boosta ee Jarmalka. Aad baad ugu mahadsantahay xidhidhiyahaaga wanaagsan iyo adeega dabagalka ee cajiibka ah adeeg wanaagsan!
Waad ku mahadsan tahay shixnadaha degdega ah ee Faransiiska
[FR] Waxaan ku xaqiijin karaa inaan helay Princess Philodendron pink dhib la'aan. Waad ku mahadsan tahay shixnadda degdega ah ee Faransiiska!
Waxaan aad ugu talin karaa SB!
Runtii si fiican ayaa looga soo buuxiyay Awstaria
[AU] Dhirta ayaa si nabad ah ii timid, baakidhkuna runtii si fiican baa loo soo buuxiyay, dhirtuna aad bay u wanaagsan tahay! Aad baad ugu mahadsantahay wax walba! Oo waxaan 100% dhigi doonaa dalabkayga mar labaad kaaga!
Waxaan u dirnaa warqadda Stekjes (News) bishii hal mar :-)
Cinwaanka emailka: Waan akhriyay oo waan aqbalay shuruudaha iyo shuruudaha
Ku dhaaf goobtan banaan haddi aad tahay:
Waa kuwan blog-yagii u dambeeyay
Ciidda dheriga iyo daboolka ciidda
Sida Loo Isticmaalo Perlite Si Loo Wanaajiyo Ciidda Loona Dhiirigeliyo Koritaanka Dhirta
Waa maxay perlite? "Hawada carrada" waa waxa ay ka dhigan tahay, waana habka labaad ee ugu fiican ee compost iyo hagaajinta dhismaha ciidda. Hel talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida si wax ku ool ah loogu isticmaalo perlite beertaada.
5 Talooyin ku Saabsan Marka Goyn-goyntaadu Ku Timaaddo Goyntaada Waxa laga yaabaa inaad ogtahay, gooyntu waxay ugu dambayntii ku soo beegan tahay gurigaaga ka dib safar dheer. Waxaad siisaa dheri, waxaad siisaa a Akhri wax dheeraad ah…
I caawi! Caleemaha jaalaha ah ee ku yaal geedaha gurigayga Waxaad si buuxda ugu raaxaysanaysaa geedahaaga cagaaran, laakiin ka dib… si lama filaan ah ayaad u aragtaa caleemo jaale ah! Maxay tani ka dhigan tahay maxaadse ka qaban kartaa? Waxay noqon kartaa dhowr sababood Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tallaabo-tallaabo: gooyn isku dhafka perlite iyo moss sphagnum
Qorshaha tallaabo-tallaabo: gooyn isku dhafka perlite iyo moss sphagnum Goynta dhirta. Waxay u egtahay mid sahlan, waana haddii aad raacdo tillaabooyinka saxda ah oo aad haysato sahayda saxda ah. Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tallaabo-tallaabo: Sida loo badbaadiyo monstera variegata goynta qudhunka xididka
Qorshaha tillaabo-tallaabo: Badbaadinta goynta qudhunka xididka Way dhici kartaa: waxaad ka soo baxdaa goynta monstera variegata qurux badan oo leh xididdo deeqsinimo leh, ilaa caleen murugo leh oo leh haraado xidid caato ah dhowr toddobaad gudahood. Si aan aad ugu faraxsanayn Akhri wax dheeraad ah…
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan beeritaanka strawberries
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato koritaanka strawberries Xagaaga ayaa halkan ku dhow! Oo yaa aan jeclayn strawberries xagaaga. Xitaa ka sii fiican, kuwaas oo aan jeclayn kuwa cusub Akhri wax dheeraad ah…
Cabirka dheriga ubaxa ee aan ugu baahanahay geedaha gurigayga?
Cabirka dheriga ubaxa ee aan ugu baahanahay geedaha gurigayga? Markaad iibsanayso dhirta, waa muhiim inaad iibsato dheriga ubaxa saxda ah ee ku habboon nooca geedka aad soo iibsatay. Haboon Akhri wax dheeraad ah…
5 Talooyin: SOS, geedkaygu cidhiidhi buu ku jiraa!
5 Talooyin: SOS, geedkaygu cidhiidhi buu ku jiraa! Ma aqoonsan tahay taas? Waxaad si aamusnaan ah u maraysa geedkaaga, dib ayaad u eegtay, oo si lama filaan ah BAM! Sidii in ay noloshii ka quusatay bay laadlaadsanaysaa. Malaha shaki Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tallaabo-tallaabo: gooyn on perlite bilowga ah
Qorshaha tallaabo-tallaabo: gooyn on perlite ee bilowga ah Goynta dhirta. Waxay u egtahay mid sahlan, waana haddii aad raacdo tillaabooyinka saxda ah oo aad haysato sahayda saxda ah. Maqaalkan waxaan ku sharaxaynaa Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tillaabo-tallaabo: Dhirta guriga ee hawo-mareenka Philodendron Verrucosum
Qorshaha tillaabo-tallaabo: Dhirta guriga ee philodendron hawo leh Haysashada dhirta-guri ee gurigaaga waa hab cajiib ah oo aad ku soo geliso dabeecad gurigaaga. Mararka qaarkood way koraan, laakiin tani macnaheedu maaha inaad isla markiiba heli karto Akhri wax dheeraad ah…
Cayayaanka Dhirta Guriga
Cayayaanka qaybta 2: Caplice and whiteflies
Cayayaanka Qaybta 2: Lafaha iyo Duqsiga Caddaa Tusmada Tusmada: Injirta Kaneecada Waxay faafisaa: xayawaanka rabaayada ah, dabaysha, dharka, shimbiraha iyo cayayaanka waxyeelada u geysata! dharka, shimbiraha Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tillaabo-tallaabo: gooyn on moss sphagnum ee bilowga ah Goynta dhirta. Waxay u egtahay mid sahlan, waana haddii aad raacdo tillaabooyinka saxda ah oo aad haysato sahayda saxda ah. Ku rid maqaalkan Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tallaabo-tallaabo: Goynta biyaha ee kuwa bilowga ah
Qorshaha tillaabo-tallaabo: gooyn biyaha loogu talagalay bilowgayaasha Goynta dhirta. Waxay u egtahay mid sahlan, waana haddii aad raacdo tillaabooyinka saxda ah oo aad haysato sahayda saxda ah. Ku rid maqaalkan Akhri wax dheeraad ah…
Qorshaha tallaabo-tallaabo: Goynta sanduuqa faafinta ee bilowgayaasha
Goynta ku jirta "sanduuqa faafinta" ee loogu talagalay bilowgayaasha Qaar badan oo ka mid ah dhirta guryaha ayaa ka soo jeeda cimilada kulaylaha waxayna si fiican u qabtaan haddii ay ku jiraan jawi la mid ah guriga. Tani waxay badanaa ka dhigan tahay huurka sare iyo Akhri wax dheeraad ah…
10 talooyin - Daryeelka dhirta guriga xagaaga
10 talo-bixin - Daryeelka dhirta guriga xagaaga xagaaga ayaa si xawli ah ku socda heerkulkuna kor buu u kacayaa. Way noo diirran tahay, laakiin sidoo kale dhirta guriga ee gurigaaga. Gudaha Akhri wax dheeraad ah…
Ma u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo nagu saabsan?
STEKJESLETTER.NL (Booqo ballan kaliya) Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp, NL
Noo soo dir fariin LiveChat
24/7 LiveChat taageerada iibka
Dukaan bilaash ah
iDEAL / Kaarka amaahda / Paypal / Apple Pay / ING Home'Pay / bancontact / Raila Oding - CBC / Belfius Direct Net / SOFORT Bangiyada / Giropay / EPS / Xulka wararka oo dhan 24
Ciwaanka emailkaaga (loo baahan yahay)
Sidoo kale ma nagu raacdaa Instagram-ka
Haa! Waxay caan ku tahay beeraleyda sida mid ka mid ah
Hubi kan cagaarka ah ee babydoll Homalomena Emerald Gem o
Ka warran daryeelka gabadhan yar ee la yiraahdo Sirta Cas
Ma waxaad raadineysaa Easter gi-ga ugu wanaagsan ee waara
Monstera Siltepecana naadirka ah goynta aan xidid lahayn ayaa leh
Philodendron Florida Ghost kaliya maaha wax naadir ah
SHEEKADA GUUL - Wadaaggu waa daryeelida Ph
Crassula Pyramidalis waa Crassula s qurux badan
Dracaena, oo sidoo kale loo yaqaan Dragon Tree, waa bec
Mid ka mid ah rabitaanka Syngonium hadda waa
Runtii waa dhir naadir ah oo cajiib ah oo dhan alocasias !!! Durba
Peperomia Caperata waa guri madadaalo iyo midab leh
Wax badan soo rar... La soco Instagram-ka
by warqad goyn 3 bilood ka hor
Weligaa ma aragtay geed naadir ah oo qurux badan oo la mid ah marwada casaanka ah ee rinji leh? Philodendron rinji -Pink - Marwada waa a
Platycerium waxaa badanaa loogu yeeraa Staghorn ama Elkhorn Fern (Dutch: Hertshoorn fern) sababtoo ah caleemaha cajiibka ah ee cajiibka ah, gaarka ah, qaabka qudhaanjada. waxay
Dhirta Epipremnum pinnatum waxay u dhalatay gobollo badan oo adduunka ah, sida Shiinaha, Taiwan, Japan, India, Malaysia, Northern Australia, ama
Tillandsia - Caadi ahaan loo yaqaan hawada, xiisaha dhirta waxaa laga heli karaa kaymaha, kaymaha roobka ama lamadegaanka - laga bilaabo
Anthurium Clarinervium - Babygal , ka waran taas, cutie!? Anthurium clarinervium waxa uu leeyahay qaab xidid oo soo jiidasho leh oo weyn, dhumucdiisuna,
Sidoo kale ma ku dhibtoonaysaa cayayaanka madax adag ee guriga? Waa hagaag Pokon Bio Against Cayayaanka Madax-adayg ee Polysect Spray ayaa la dagaallama a
Laamaha Mitsumata waxay u muuqdaan kali kali ah oo ku yaal weel dheer ama marka lagu daro ubaxyo la qalajiyey. Waxaad samayn kartaa inta ugu badan
Ma ogtahay in marka Orchid ama Phalaenopsis ay dhammeeyaan ubax, waxaad ku dhiirigelin kartaa inay mar kale ubaxaan.
Peperomia Caperata waa geedo madadaalo leh oo midab leh oo aan ka korin wax ka badan 20 sentimitir. Guryahaan waxay ka dhigan yihiin
Runtii waa dhir naadir ah oo cajiib ah oo dhan alocasias !!! Alocasia Scalprum waxay leedahay caleemo qaro weyn iyo caag leh oo leh muuqaal adag, kuwaas oo ah
Mid ka mid ah rabitaanka ugu badan ee Syngonium xilligan waa hubaal barta cas ee tricolor Noocan dhirta sida
Dracaena, oo sidoo kale loo yaqaan Dragon Tree, ayaa noqonaysa mid sii kordheysa oo caan ah oo weli ah noocyada dhirta quruxda badan. Geedka
Crassula Pyramidalis waa nooc qurux badan oo Crassula ah oo leh caleemo qurxoon. Kuwani waxay u koraan midba midka kale oo aad ugu dhow oo bixiya
by warqad goyn 2 bilood ka hor
Sheekada Guusha - Wadaaggu waa daryeelida caleen yar oo qurux badan Philodendron Florida Ghost caleen siinaya farxad aad u badan iyo kalsooni
Philodendron Florida Ghost kaliya maaha warshad guri dhif ah oo la ururiyo, waa caleemo qaabaysan oo cajiib ah sida
Goynta aan xididka lahayn ee Monstera Siltepecana ee dhifka ah waxay leedahay caleemo qalin ah oo qurux badan oo leh caleemo xidid madow oo cagaaran. Ku fiican dheriyada laalaada ama
Ma waxaad raadinaysaa hadiyadaha Easter-ka ee ugu wanaagsan si aad uga yaabsato asxaabtaada? Markaa heshiiska xidhmada hadiyadaha Easter-ka waa
by warqad goyn 1 month ago
Sidee ku saabsan daryeelka gabadhan yar ee loo yaqaan 'Short Secret of Alocasia qoyska'? Sirta cas waxay u baahan tahay carro si fiican u miiraysa, tani waxay xaqiijinaysaa
by warqad goyn 4 todobaad ka hor
Hubi kan cagaarka ah ee babydoll Homalomena Emerald Gem out Miyaanay ahayn ilmo yar oo la jeclaysto oo la daryeelo? ah
by warqad goyn 2 maalmood ka hor
Haa! Iyadu waxay caan ku tahay beeraleyda sida mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan dhammaan Alocasias ee geedkan
Nagala soco baraha bulshada sidoo kale
ay wadaan Facebook
Adeegga macaamiisha ee weyn!!!
Tyas Widyastuti Seen-Hindiya
Qurux badan 🪴🪴 deg deg ah gaarsiinta iyo dabcan si fiican loo buuxiyay, adeeg wanaagsan, jawaab degdeg ah su'aashayda. Runtii ku talin
Waxaan helay goyn qurux badan, aad ugu faraxsan!
Bil ka hor waxaan halkan ka soo iibsaday Syngonium Mottled iyo Syngonium variegata. Marka la barbardhigo kuwa kale oo badan... goobaha kuwani aad bay uga jabnaayeen. Si wanaagsan ayey u yimaadeen oo aad ayey u wanagsanayen tan iyo markaas. Aad ugu faraxsan!akhri wax badan
Waxaan dalbaday dalabkeygii ugu horreeyay toddobaadkan. Waxaan ka baqay in ay ku iman doonto waqtigii loogu talagalay, laakiin ka dib markii aan la xiriiray... webshop waxay ii xaqiijiyeen in dalabkaygii si degdeg ah loo soo rari doono oo ay noqotay! Laba maalmood gudahood ayaan dalabkaygii ku helay, goyntuna way ka qurux badnayd sidii aan moodayay! Xidhiidhka lala yeeshay dukaanka shabakada ayaa sidoo kale ahaa mid aad u wanaagsan. Dhab ahaantii waxaan halkan ka dalban doonaa marar badan!akhri wax badan
Hadda waxaan ka helay dalabkaygii Syngonium Green Splash. Waa maxay dhirta wanaagsan. Calaamadaha caleemaha ayaa xitaa ka sii fiican... nolosha dhabta ah markaa sida ay u eegaan sawirka mareegaha. Macmiil aad u faraxsanakhri wax badan
Adeeg weyn! Dalabka ayaa si degdeg ah u yimid oo si wanaagsan baa loo soo baakadeeyey! Iyo sida la yaab leh, geedka wuxuu horeyba ugu jiray a... jar 👌🏻akhri wax badan
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helay dukaankooda markii aan dhex mushaaxayay qaar ka mid ah dhirta gaarka ah. Waxaan iibsaday kuwan aad u fiican... dhirta iyaga ka mid ah oo aan aad ugu qanacsanahay adeeggooda. Dhirtu waxay ku timid nidaam wanaagsan oo aad loo soo buuxiyay. Waxay ku dareen anthurium yar oo dheeri ah maadaama tii aan iibsaday uu ku yimid kaliya saddex caleemood. Tilmaantaasi waxay ahayd mid macaan oo waxay i dareensiisay inay runtii qiimeeyaan macaamiishooda. Iibkaygii ka dib, waxa aan is arkay in aan wax badan oo dhirtooda ah ka raadinayo shabakadooda. Milkiilayaasha ayaa sidoo kale ahaa kuwo aad loo heli karo oo la aqbali karo. Runtii aad ayay u fiicantahay in la yeesho wada hadal saaxiibtinimo iyo fikir leh.akhri wax badan
adeeg aad u wanaagsan oo degdeg ah. dabaasha ayaa ka weyn intii la filayey. runtii lagu taliyay!!
Isfaham la'aanta dhalmada, oo lagu xalliyo maalin gudaheed. Sare! Tayo wanaagsan oo degdeg loo keenay.
Waxaa la iibsaday vermiculite. Alaab wanaagsan oo lagu bilaabo dhirta guga/xagaaga. Dhakhso gaarsiin Baakad nadiif ah. I... waan faraxsanahay! Waad ku mahadsan tahay Cutietter!akhri wax badan
Geedkii wuxuu ku yimid xaalad qurux badan! Gaarsiin saaxiibtinimo leh oo degdeg ah😍
Waxaan filayey geed 40 cm ah, mid mitir ah oo shiilan oo nabaro 40 cm ah ma jiro... Aad ayaan ugu faraxsanahayakhri wax badan
Aad baa loogu taliyay min bilow ilaa dhamaad Waxaa lagugu wargelin doonaa habaynta iyo dirida Heerkulka ayaa ahaa... khafiif ah laakiin wuxuu yimid xirmo kulayl si loo hubiyo. Bixinta waxay ahayd maalintii xigtay! Wax walba waxay ahaayeen si habsami leh oo ammaan ah. Markaa wax walba si fiican ayay u yimaadeen! Geeduhu waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo caafimaad qaba! lagu taliyay! Ilaa tan xigta!akhri wax badan
Khibrad aad u wanaagsan, dad aad u fiican oo waxtar leh! Si fiican u hubi 1 bil ka dib sida ay dhirtu tahay, iyo... taasi waa mid aad u fiican. Dabbaashaydii si fiican uma socon, waxaana ku heshiinay in aan mid ka mid ah dalabkeyga soo socda helo, markaas waa sidaas. Waxaana la yaabay in aan helay 2 gooyn oo xididaysan!akhri wax badan
Khibrad hore oo aad u fiican. Geedkaygu si fiican buu u buuxsamay wuxuuna ku yimid xaalad wanaagsan. Tani hubaal ma ahaan doonto tii u dambaysay... waqtiga aan ka dalbanayo halkan.akhri wax badan
Waxaan sameeyay dalabkii ugu horreeyay. Dhirta ayaa si wanaagsan loo helay. Inkastoo dib u dhaca dhalmada, weli caafimaad qabaan iyo... dhirta faraxsan! akhri wax badan
Aad ayaan ugu faraxsanahay amiiradeyda cad ee philodendron si fiican oo degdeg ah ayay u bixisay
Waxa aan dalbaday markii ugu horeysay degel aan la aqoon. Oo wow wax walba si weyn ayey u dhaceen... wehel! Si degdeg ah u habaynta amarka oo si fiican loo baakadeeyay. Haddii shayga la iibsaday aanu buuxin shuruudahooda, lama diri doono. Sare! Aad u qanacsan! Waxaan hubaal halkan mar kale dalban doonaa! Mahadsanid!akhri wax badan
Wax yar ka hor waxaan dalbaday halkan iyo dhirta ayaa wali si fiican u shaqeynaya :) Adeeggu sidoo kale waa mid aad u fiican... . Hal geed ayaa soo gaaray dhaawac ka dibna si fudud ayaa dib loogu soo celiyay!akhri wax badan
Dhawaan la dalbaday philodendron Verrucosum, geedka aan ugu jeclahay... werwerka qaar, laakiin nasiib wanaag waxa soo baxay in si fiican loo soo buuxiyay! Markaa 4 maalmood ka dib markii la qorsheeyay in si naxariis leh sanduuq lagu dhex jiro, geed qurux badan oo buuxa ayaa soo baxay. Runtii aad ayaan u farxay, waxayna hadda si weyn uga dhex muuqataa gurigayga 🥰akhri wax badan
Khibrad weyn! Bixinta ayaa ahayd mid aad u degdeg badan, gooyntuna waxay ku timid xaalad aan nadiif ahayn. Dadka ku sugan warqadda Goynta waa... sidoo kale aad iyo aad u fiican! hubaal ku talinaynaa! †akhri wax badan
Helay dhir aad u wanaagsan. Dhowr su'aalood oo horudhac ah ayaan lahaa, waxaana ahay mid saaxiibo ah oo dhaqso badan uga jawaaba... istaagay. Sidaas aad loogu talinayaa! akhri wax badan
Xulasho weyn oo dhir ah oo aadan si fudud uga helin dukaanka beerta caadiga ah. Dhirta aan dalbaday ayaa degdeg u yimid... oo si fiican loo baakadeeyay. Dalbashada koowaad laakiin hubaal waan dalban doonaa mar kale markaan u baahdo xoogaa cagaar ah oo guriga agtiisa ah!😄akhri wax badan
Adeegga macaamiisha runtii weyn! Si weyn ugu tali dukaankan.
Dhawr toddobaad ka hor waxaan ka dalbaday gabadh-Philodendronwhiteprincess dukaankaaga khadka ah. Waxay ku timid xaalad aad u wanaagsan Jarmalka... oo runtii wax yar bay indhaha ku haysaa… Salaan ka timid Jarmalkaakhri wax badan
Kaliya dalbo, oo yimid ka hor intii la filayay. La yaab dheeri ah oo fiican, si taxadar leh loo soo buuxiyay!
Waa markii labaad oo dalbashada halkan Dhirta si fiican loo baakadeeyey oo qurux badan!
Spagnum moss ayaa dalbaday, si habsami leh loo baakadeeyay oo si degdeg ah loo raray!
Waxaan ka helay warshad qurux badan Cuttingsbrief. Inkasta oo warqaaduhu uu dib u dhac dheer ku lahaa keenista, haddana geedkii ayaa yimid... qurux iyo aakhirkii wax walba si fiican bay u noqdeen. Geedka si fiican ayaa loo buuxiyay. Xidhiidh aad u naxariis badan oo xirfad leh oo lala yeesho iibiyaha. Dhab ahaantii eshob ugu fiican ee aan aqaan.💚☺akhri wax badan
Mareegtan waa hubaal waa lagula talinayaa! Dhirta ayaa si fiican u soo buux dhaafisay oo xaalkeedu wanaagsan yahay. Intaa waxaa dheer, ee... Adeeg macmiil oo aad u wanaagsan, jawaab degdeg ah oo saaxiibtinimo leh. Dhammaanba degel wanaagsan oo wanaagsan oo ku saabsan taas oo aysan jirin wax laga cabanayo!akhri wax badan
Stwkysbrief waa dhir tayo sare leh iyo daryeel macmiil oo aad u naxariis badan. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa dhirtooda naadir ah qiimo jaban... qiimaha iyo dheryihii gaar ah. Ciao oo ka yimid Talyaaniga.akhri wax badan
Haa, waa hubaal! Waxaan dalbaday PWP ka dib waxaan galay tartanka sawirka waxaanan ku guuleystey amiirada casaanka ah 🥳 . maanta noqo... waxay ku yimaadeen xaalad aad u wanaagsan aad ayaan ugu faraxsanahay 👌🤗🤗akhri wax badan
Dalabkaygii si degdeg ah iyo shakhsi ahaan ayaa loo keenay. Mahadsanid
Gaarsiin aad u degdeg badan! Dhirta ayaa si taxadar leh loo duudduubay oo xaalad qumman. Ilaa hadda kani waa kii iigu horreeyay... Dalabka dhirta ee goobtan, waxaanan kuu dammaanad qaadi karaa inaysan noqon doonin iigu dambaysay. Gebi ahaanba ku tali! akhri wax badan
waxay heshay amiirad cad oo philodendron aad u fiican oo leh 2 caleemo dayax badhkeed iyo caleen cusub. Nasiib darro, caleen... Waxay isu rogtay brown, laakiin waxaan filayaa in taasi ay sabab u tahay qoyaanka guriga. (40%)akhri wax badan
Aad u xirfad leh, adeegga macaamiisha cajiib ah iyo wax kasta oo ku yimid waqti iyo xaalado qumman! Gebi ahaanba ku talin... waaakhri wax badan
Adeeg degdeg ah oo siman, doorasho badan oo dhir ah iyo wixii la mid ah
Aad waxtar u leh adeegga macaamiisha oo buuxa. Dalabkaygu wuxuu ku yimid si xawli ah oo xaaladiisu wanaagsan tahay. Aad ayaan ugu qanacsanahay oo dhawaan ayay soo noqon doontaa... dalbo mar!akhri wax badan
Waxaan la lahaa khibradda adeegga macaamiisha ugu fiican dukaankan. Steffie kaliya ugama jawaabin su'aalahayga xawaare fudud... laakiin waxay kaloo igu dartay wadan kale oo dookh u ah dhoofinta markaan waydiiyay. Steffie waad ku mahadsan tahay taas! Dhirtu waxay ku sugan yihiin xaalad aad u fiican waxayna durba toogtaan caleemo cusub. Wax walba si fiican ayaa loo soo buuxiyay waxaana jira ikhtiyaar lagu daro baakad kulaylka sidoo kale taas oo muhiim u ah bilaha jiilaalka. Waxaan kugula talin lahaa in aan aad loo waraabin xilliga jiilaalka sababtoo ah waxay dhaawici kartaa dhirta haddii aysan jirin xirmo kulayl ah iyo in si fiican loo daboolo ciidda si aysan uga soo bixin dheriga (wax yar ayay samaysay, laakiin baakidhku wuxuu u socdaalay laba jeer). wadamada mana dhici karto in la xakameeyo sida loola dhaqmo warqaadayaasha). Dhirtu waxay ahayd hadiyad la yaab leh oo walaashay ah mana jirin wax ikhtiyaar ah oo lagu dalbo waddanka aan ku noolahay wakhtigaas. Waad ku mahadsan tahay Steffie hadda waxaan dalban karaa wax naftayda ah :) Waxay runtii leeyihiin xulasho wanaagsan oo dhir ah oo cabbirro kala duwan leh iyo qiimo wanaagsan. Waxaan si gaar ah u raadinayay amiirad philo caddaan iyo casaan ah waxayna leeyihiin labadaba. Sidoo kale wuxuush kala duwan, gooyn iyo dhirta kala duwan. Dhirtu aad bay u caafimaad qabaan oo mar hore ayay caleemo cusub u baxayaan. Ma jirin wax daahitaan ah oo ku yimid boostada, waxaana iimaylo ka helayay warar cusub dukaanka. Aad ayaan ugu faraxsanahay gaar ahaan adeegooda macaamiil ee weyn!akhri wax badan
Dalbaday Axadii hore Waxaa la keenay Jimcihii. Dhirtu waxay u egtahay qurux iyo caafimaad!
Laba jeer dalbaday oo aad ugu faraxsan labadaba. Dhoofinta degdega ah, jawaab saaxiibtinimo oo qurux badan... Alaabta.akhri wax badan
Soo bandhigid gaar ah oo aad u jaban. Bixinta ayaa ahayd mid degdeg ah oo dhirtuna way ka fiicnayd oo way ka weynayd intii la filayay! Aad... ku faraxsanahay wax iibsigayga, waxaana hubaal ah inaan mar kale dalban doono.akhri wax badan
Soo rarid degdeg ah oo si fiican loo baakadeeyay! Aad ayaan ugu faraxsanahay amarkayga waxaana hubaal ah inaan mar kale dalban doono mustaqbalka!
Si farxad leh ula yaabay tayada gooyn kuwaas oo dhirta mini, xoogaa ka weyn sidii aan filayo iyo... Waxaan mar hore dhigay dalab labaad. Xiriir fiican oo lala yeesho iibiyaha, qiimaha aad u cadaalad ah iyo si cad jacayl badan oo dhirta.akhri wax badan
Waad ku mahadsan tahay dhirta quruxda badan. Mega waad ku mahadsantahay abaalmarinta quruxda badan ee la ii ogolaaday inaan ku guuleysto (Philodendron... Pinnatipartita, Philedenderon Minima, Hoya Kerri). Waan jeclahay adeeggaaga iyo sida aad ula xiriirto. Markii hore waxay ku bilaabatay xiriir email ah, iyadoo la arkayay inay qabow badan tahay bannaanka dhowr toddobaad ka hor, waxaan kuu soo diray iimaylka haddii aad rabto inaad soo dirto amiiradeyda cadaanka ah markii cimiladu xoogaa fiicnaatay. Waxaan arrintan ka helay jawaab fiican. Xidhiidhka ka dib iyada oo loo marayo Instagram ee ku saabsan dhirta guuleystay waxay ahayd mid cajiib ah. Waa maxay dadka wanaagsan ee aad shaqaalayso. Marka la soo koobo, waan ogahay meesha aan ka iibsan doono gooyn iyo dhirta mustaqbalka. Aad baad ugu mahadsantahay wax walba. 10 weyn oo lagu daray adeeggaaga cajiibka ah, dhirta quruxda badan, isgaarsiinta iyo dabcan dadka macaan ee adiga kuu shaqeeya.akhri wax badan
Wax kastaa waxay u dhaceen sidii ballanku ahaa, dhirtuna waxay ku timid xaalad qurux badan! Hubaal ayaa dalban doona mar kale.
Bilaabay qaadashada gooyn dhirta aniga ii gaar ah ilaa November, laakiin si degdeg ah u dhibay by qulqulka aan dhammaadka lahayn ee finan fungus. Ka dib aniga... Si loo xalliyo dhibaatada si madax-banaan marka hore, waxaan ugu dambeyntii qiray khasaarahayga intii lagu jiray mowjadda kaneecada ee saddexaad/afraad ka dibna waxaan dalbaday Pokon ka dhanka ah Cayayaanka Madax-adayg. Alaabta la dalbaday subaxnimadii Axadda, si lama filaan ahna waxay u timid galabtii. Isla markiiba waxa qaaday weerar rogaal celis ah, tan iyo markaas ma arag kaneeco nool. gaarsiinta ugu sareysa Waxay ahayd inaan dhaqso u sameeyo. Warqadda gooyntu waxay leedahay gooyn xiiso leh iyo isgaadhsiinta / keenista waa mid wacan, markaa hubaal waan soo laaban doonaa.akhri wax badan
Waxaan ahay fur-fure. Warqaddii jarista waxaan dalbaday sanduuqa goynta monstera xididka leh. Degdeg ah oo nadiif ah... gaarsiin. Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa sida fur-fudud ahaan waxay ahayd haddii dhirta lagu calaamadin lahaa magaca oo ay jirto sharraxaad yar oo ku saabsan daryeelka dhirta. Si kastaba ha ahaatee, weli si fiican ayaa la ii caawiyay by jarida warqad via Instagram.akhri wax badan
Geed aad u qurux badan oo caafimaad qaba! Si wanaagsan loo soo baakadeeyay iyo keenista iyo adeegguba sidoo kale waxa ay ahaayeen heerkii ugu sarreeyay 👌🏼. mid aad u qurux badan... dhir kala duwan oo qiimo jaban leh! Waxaan ahay taageere oo si buuxda u jeclahay amiiradeyda cad ee philodendron 🥰!akhri wax badan
Adeeg aad u wanaagsan! Dalbaday Arbacada oo mar hore la keenay Khamiista! Goynta ayaa si taxadar leh loo soo buuxiyay si ay u... hubaal in aan la waxyeeleyn karin jidka. Goynta lafteedu waxay u egtahay mid aad u fiican!akhri wax badan
Monstera Variegata quruxda badan waxaan ka soo iibsaday Stekjesbrief. Aad u weyn oo caafimaad qaba. Si taxadar leh ayaa loo soo raray oo timid... si badbaado leh. Waxa la soo diray habeenimadii salaasada, waxaan helay raad iyo raad raac, geedkana waxa la keenay Danmark duhurnimadii jimcaha. Waxaan aad ugu talinayaa Stekjesbrief, waxay si gaar ah ugu wanagsanayen bixinta talooyinka iyo adeegga macaamiisha ee weyn. Waxaan mar kale kaa iibsan doonaa dhirta.akhri wax badan
dheriyo qurux badan iyo dhir qurux badan. imaatinka wanaagsan
La helay dhir iyo dhir aad u wanaagsan! Sidoo kale si aad u wanaagsan ayaa loo soo buuxiyey, dhirtu waxay u timid si fiican oo aan waxyeello lahayn... gudaha (xitaa heerkulkan qabow) Aad ugu qanacsan! Mar kale ayaa dalban doona dhawaan!akhri wax badan
Runtii aad u fiican! Waxaan u baahanahay spagnum sida ugu dhakhsaha badan, waxaan sidoo kale tilmaamay tan, iyo ku dhawaad ​​isla markiiba ka dib bixinta... Waxaan helay jawaabta ah in geedka geedku ka tagi doono isla maalintaas si uu u ahaado ka hor dhamaadka usbuuca! Waana ku guulaystay! :D waxay badbaadisay geedkaygii si aan u faraxsanahayakhri wax badan
Waxaan kaliya ku talin karaa dukaankan dhirta! Dhirta si fiican ayaa loo soo buuxiyay oo taxadar leh. Tayo aad u fiican sidoo kale.... Laakiin waxa aan ugu jeclahay waa dadka ka dambeeya shirkadda: xiriir aad u fiican mar walbana adiga ayay kuu joogaan! Taageere! Waxaan aad ugu talinayaa dukaankan! Dhirta waxaa ka buuxa daryeel, waana kuwo qurux badan oo tayo sare leh. Laakiin waxa aan ugu jeclahay, waa dadka ka dambeeya dukaanka: aad u fiican oo saaxiibtinimo, oo had iyo jeer diyaar u ah inay caawiyaan! A+++akhri wax badan
Waxaan halkan ka soo iibiyay monstera variegata si fiican ayuu u yimid!!! Dhowr maalmood ka dib, wuxuu hore u sameeyay mid cusub... splash 😍 Adeegga ugu sarreeya!akhri wax badan
Saaxiibtinimo heer sare ah, dhir qurux badan qiimo wanaagsan oo had iyo jeer si fiican loo baakadeeyay! lagu taliyay!
Waxaan ka dalbaday 3 geed oo Talyaani ah. Si degdeg ah ayey u yimaadeen oo si fiican loo baakadeeyey. Sicir aad u wanaagsan iyo jawaab degdeg ah. lagu taliyay... :)akhri wax badan
Weli aad u nool oo leh dhirtayda quruxda badan. Adeeg weyn sidoo kale! Iibiyaha aad u fiican! Aad loogu taliyay
Kala duwanaansho fiican iyo gaarsiin degdeg ah! Adeeg macmiil oo degdeg ah oo fiican!
Jeclow dukaankan. Kaliya dadka ugu naxariista badan abid. Had iyo jeer ku jir qosol iyo sheekeysi oo qiimo daacad ah u yeelo... dhirta. Waxaad dhab ahaantii ogtahay inay ugu jiraan jacaylka dhirta. Waxay sidoo kale mararka qaarkood ku sameeyaan dhalmo gaar ah halkan Nederlaan 🥰.akhri wax badan
Waxa la helay dhir qurux badan iyo gooyn Arbacadii hore. Baakad aad u wanaagsan iyo adeeggu waa heerkii ugu sarreeyay!... Dhab ahaantii lagula talinayaa kuwa sidoo kale raadinaya gooyn aad u fiican! Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka dalban doonaa Stekjesbrief marar badan.akhri wax badan
Aad ayaan ugu faraxsanahay wax kasta oo aan halkan ka soo iibsaday. Dhirta ayaa si nabad ah ku timid oo si fiican loo baakadeeyay. The... saamiga tayada qiimaha waa heer sare. Soo jeedintu waa mid ballaaran. Waxay si fiican u dhegaystaan ​​jawaab celinta/waxa uu macmiilku jeclaan lahaa inuu ku arko dukaanka dhexdiisa. Isgaarsiintu waa mid degdeg ah, furan oo cad. Sidoo kale aad ugu faraxsanahay dhammaan dhalooyinka aan halkan ka iibsaday! Dhab ahaantii wax badan ayaa halkan ka dalban doona mustaqbalka. Lagu taliyay!🌿 Dhalooyinka midabka leh ee sawiradu waxay ka yimi Stekjesbrief. Hedera sidoo kale.akhri wax badan
Si fiican loo baakadeeyay, si degdeg ah loo raray, lala xiriiriyay dhirta aan hadda la heli karin oo laga caawiyay beddelka... dhirta laga dooran karoakhri wax badan
Waxaan raadinayey gabadh qurux badan oo la awoodi karo oo Philodendron pink princess & amiirad cad Philodendron in muddo ah. Iyadoo loo marayo... On instagram in badan oo raadinta webshop wanaagsan waxaan u imid warqad jarista. Anigoo mareegaha soo galay oo xog-waraystay.. Halkaas waxaa la igu soo dhaweeyay si saaxiibtinimo iyo xushmad leh. Waxaan helay Philodendron pp isla maalintaas! Sawiradu wax badan ayay ballan qaadeen, laakiin markii ay soo gaadheen maalin iyo badh gudahood. (Si fiican baa loo soo xidhay.) Dhammaantiin waan farxay. Anigoo ka labalabeynaya 5 daqiiqo, waxaan sidoo kale dalbaday amiirad cad oo Philodendron ah. Oo kaliya ka fikiri kartaa 1 kelmad.. wow.! Waayahay Aad ugu faraxsan saaxiibtinimada macmiilka. Adeegga degdega ah oo ugu fiican! Dhab ahaantii waxay dalban doontaa dhir badan halkan. lagu taliyay.!! Ha ka waaban.!! Tani waxay leedahay adeeg macaamiil oo heer sare ah waxayna u dirtaa si dhakhso leh oo nadiif ah * waxaad dabcan ku dari kartaa xirmo kulaylka xilliga qaboobaha. Midkaygu wuxuu ahaa xitaa diirran markii dhirtaydu timid. Mar labaad waad ku mahadsan tahay caawimadaada. adeegga macaamiisha. iyo gaar ahaan dhirtaada quruxda badan.akhri wax badan
Runtii mareegaha sare ee dhirta! Dhoofinta degdega ah (kaliya 1 maalin jidka Belgium) iyo tayo wanaagsan iyaga... Qiimaha Xididdada labada geed ayaa durba ka soo baxay dheriga! Talo yar: ma laga yaabaa inay bixiso ikhtiyaarka rarida xirmada kulaylka ee jiilaalka? Dhirtu waxay soo gaadhay waxyeelo yar yar markii ay timid heerkulka qabowga (barafkii habeenkii), laakiin waxay ahayd inaan filayeyakhri wax badan
Waxaan helay dalabkaygii isla maalintaas! Aad u degdeg badan iyo geedka lama dhaawacmin haba yaraatee tan iyo markii ay isa soo dhiibeen aniga... meel. Dhammaan shaqaaluhu waa kuwo aad u naxariis badan, caawiya oo aad u fiican. Si fudud u noqday webshop-ka aan jeclahay ee dhirta! dhirta weyn iyo si la yaab leh si degdeg ah iyo gaarsiinta saaxiibtinimo mar kale. Xannaanada dhirta ee aan ugu jeclahay🥰akhri wax badan
Aad ugu qanacsan iibsashada Monstera albo borsigiana variegata goynta. Si fiican ayaa la iila socodsiiyay iyo... haddii aad hesho goynta xaalad aad u fiican. Qadar weyn oo xididdo ah si ay isla markiiba u raacdo walaalkeed weyn. Aad u qanacsan!akhri wax badan
Adeeg weyn, dhir fantastik ah, lagu taliyay!
Jedda ee Os
Dhirta fantastic, iyo adeeg fiican. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helay warqad gooyn.. mar dambe ima lumin doonaan
Rarida degdega ah iyo dhirta ayaa si fiican u timid. Mahadsanid!
Degdeg ah oo si taxadar leh u raritaan, aad ugu faraxsan 😊
In kasta oo dalabkaygii ugu horreeyay uu lumay iyada oo ay uga mahadcelinayaan shirkad boosta oo aan la shaacin, Tamara iyo... Xarafka jarista oo si sax ah u laalaabma oo si naxariis leh loo simay. Dalabka cusub ayaa ku yimid xaalad heer sare ah. lagu taliyayakhri wax badan
Dhirta quruxda badan ee qiimo fiican leh, si degdeg ah loo raray, si taxadar leh loo baakadeeyay. 10 dhibcood 10kii!
Waxaan khibrad aad u fiican u lahaa Warqad Goynta! 👍 Dalabka Austraia, Dhirtu waxay ku timid xaalad aad u wanaagsan. Tamara waa... aad waxtar u leh! akhri wax badan
Tamara aad bay u caawisay! Waxaan rabay in aan iibsado qaar ka mid ah dhirta laakiin kumay soo rarin UK. Tamara waxay gacan ka gaysatay abaabulka maraakiibta, iyo... dhirtu waxay timi si taxadar leh oo ay ka buuxaan walxo dib loo warshadayn karo! Hadda waxay u soo raraan UK, waxaana aad ugu talin lahaa ☺️akhri wax badan
Dalabkaygii ugu horreeyay ayaa si habsami leh loogu geeyey Belgium dhawr maalmood gudahood. Baakad aad u wanaagsan, gooyn iyo dhir... wuxuu ka soo baxay sanduuqa isagoo aan waxyeello gaarin. Mudan in lagu celiyo, mahadsanid!akhri wax badan
Dalbaday Talaadadii oo la helay maanta (Sabti). Ka dib markii ay dadku ku badnaayeen PostNL sababtoo ah Corona. Wali eeg... u muuqataa qurux badan oo caafimaad leh oo hubaal dalban doonaa marar badan via Stekjesbrief!akhri wax badan
Gaadhida degdega ah iyo dhir baakadaysan oo aad u wanaagsan! Dhirtu sidoo kale ma ahayn qaali waxayna u ekaayeen kuwo qumman! Maya... dhaawac ama cayayaan! Waxaan ku talin karaa in qof walba warqad u gooyo!akhri wax badan
Waxaan kaa dalbaday tiro dhir ah usbuucii hore waxaanan rabay inaan ku ogeysiiyo inaan aad ugu faraxsanahay 🥰... adeeg aad u wanaagsan, si fiican loo soo baakadeeyay oo runtii qiimo fiican leh 💁🏼‍♀️akhri wax badan
Adeegga ugu sarreeya iyo gaarsiinta degdegga ah. Dhirta aad bay u qurux badan yihiin. Aad ugu faraxsan.
Dalbaday fiidnimadii shalay Shalayna gudaha! Alla maxaa guulaysta! Waan ku faraxsanahay. †
Dhirta aad bay u fiican yihiin oo si wanaagsan loo daryeelaa Nabadgelyo qof walba
Sidee u fiican tahay in laga dalbado warshad online? 🤩 Dadka quruxda badan ee warqadda gooya waxay ka soo bixiyaan dhirta quruxda badan... yar ilaa weyn iyo dhirta dadka waaweyn ilaa gooyn! 🌱 Si habsami leh ayaa loo xirxi doonaa si ay u badbaadiyaan inta ay safarka ku jiraan Waxaa hubaal ah in lagu taliyay in la dalbado!akhri wax badan
Soo rarid degdeg ah, iyo qurux, dhir caafimaad leh! Inkasta oo ay joogeen PostNL usbuuca dhammaadkiisa, way eegeen... weli fiican, si fiican u buuxsamay oo ciidda qoyan. lagu taliyay! akhri wax badan
dib u eegista soo socota
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies
Waxaan isticmaalnaa cookies si aan awood ugu siinno shaqeynta shabakadda iyo si aan u fahanno waxqabadka boggayaga. Waxaad ogolaatay cookies-kayaga adiga oo sii wada isticmaalka mareegahayaga. Dejinta cookieswaan ogolahay
Dulmarka gaarka ah
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies si ay u wanaajiso khibradaada markaad dhex wareegayso mareegaha. Kuukiiskaan ka mid ah, cookies-ka loo kala saaray sidii loo baahnaa ayaa lagu kaydiyaa biraawsarkaaga maadaama ay lama huraan u yihiin shaqada aasaasiga ah ee degelka. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa cookies-ka qolo saddexaad oo naga caawisa falanqaynta iyo fahamka sida aad u isticmaasho degelkan. Kukiyadan waxa kaliya oo lagu kaydiyaa biraawsarkaaga ogolaanshahaaga. Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ka baxdo cookies-kan. Si kastaba ha ahaatee, ka bixista qaar ka mid ah cookies-kan ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato khibradaada wax raadinta.
Had iyo jeer daaran
Kukiyada lagama maarmaanka ah ayaa gabi ahaanba lama huraan u ah shaqeynta saxda ah ee mareegaha. Qaybtani waxay ka kooban tahay kaliya cookies kuwaas oo dammaanad qaadaya hawlaha aasaasiga ah iyo sifooyinka amniga ee mareegaha. Kukiyadani ma kaydiyaan wax macluumaad shakhsi ah.
KAYDI & AQBAL
Liiska sugitaanka - Liiska sugitaanka Waanu ku wargelin doonaa marka alaabtu kayd tahay. Fadlan hoos geli ciwaan email sax ah
ii soo dir haddii la heli karo